Xeer waa sharci-dhaqameedka soo jireenka ahaa ee Bulshada Soomaalida, kaasi oo qeyb ka ah sadexda nidaam ee ku Dastuurku salaysan yahay. Xeerku waa sharciga bulshadu isku maamusho kaasi oo qeyb ahaan ku salaysan diinta Islaamka, qeybta kalena laga keenay dhaqanka umada Soomaaliyeed.
2 Geedka iyo Garta
3 Hab-bilawga garta
4 Noocyada eedaha
5 Noocyada garaha
Garta dhaqanka iyo garsoorka Soomaalida
Ummadda Soomaaliyeed ee kumannaanka sano ku noolayd cidhifka bariga Afrikaad, waxa ay lahayd hidde soo-jireen ah iyo dhaqan nolosheeda ku sargo’an. Dhaqanku waa “isu-geynta nolosha maaddiga iyo ruuxiga ah ee bulsho leedahay, soona maray isbedello taariikheed”. Halka hidduhu uu yahay “sooyaal filweyn oo la iska dhaxlo oo ummadi leedahay”,(eeg Qaamuuska Af-Soomaaliga, Cabdalla Cumar Mansuur, iyo Annita Puglielli). Dhaqammadaasi waxa ay ahaayeen kuwo koobsanaya dhammaan dhaqdhaqaaqa nololeed mid maalinle ah iyo mid sannadle ahba, sidoo kalena waxa ay ahaayeen kuwo metala hab-fikirka iyo garaadka bulsheed ee Soomaalida.
Dhaqammada suubban ee lakala hiddaystay waxa ka mid ahaa midka khuseeya garta iyo garsoorka. Oo Soomaalidu waxa ay lahayd garsoor caadil ah oo ku dhisnaa maahmaahda odhanaysa “wiilkaaga iyo wiil gaalo garta waa loo simaa”, iyo midda kale ee ah “ gar waa loo wada islaam”. Sida oo kalena waxa ay lahayd hab-garnaqsi oo heer sarreeya, kuna binaysan maahmaahda tidhaahda “gartaada inta aanad geedka tagin ayaa la sii akhristaa” iyo midda kale ee tibaaxda “ geedjoog gartii waa yaqaan, laga dhimmayna dhaxalkii waa yaqaan”.
Marka aad si dhab ah ugu kuurgasho garsoorka iyo garta dhaqanka ee Soomaalida, waxa aad ogaanaysaa in uu ahaa maxkamad hallaasi ah oo mujtamaca u siman, qof kastana ka dhiibto dacwadda uu qabo, oo xataa xilligii gumaystaha Soomaalidu aanay u baahanin garsoorkii isticmaarku dalka ka yagleelay.
Curiskan waxa aynnu si kooban ugu soo bandhigaynaa sida uu ahaa habgarsoorkii Soomaalidu, iyo hannaankii garta dhaqanku ay lahaan jirtay sebenkii hore, ee dhan walba ay soomaalidu ka ahayd ummad isku filan oo madaxbannaan..
Geedka iyo Garta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Geedku waxa uu mar ahaa goob-garsoor(maxkamad) marna waxa uu ahaa gole wadatashi. In garta lagu naqo geed weyn oo hadhac ah hoostiisu, waxa ay ka mid ahayd hab-maamuuska garta gaarka u ah iyo tiirarka udub-dhexaadka ah ee aan la hilmaami jirin. Si fiican ayaa loo gogli jiray, looguna astayn jiray xeerbeegtida iyo garramayaasha labadaba. Waayo inta badan garta fadhi iyo dooyaysi ayaa lagu naqi jiray, ee taagnida iyo galluubnaantu sax ma ahayn. Sida badanna geedka garta cidna lagama celin jirin oo waxa uu ahaa madal furan oo ay dhagaysigeeda dadku ka qaybgli karaan. Geedka waxa ka garniqi jirray xidaar xeer aqoon ah, oo xirib iyo xilkasnimo lagu majeerto, xurmana ku dhex leh golayaasha lagu galgaal-bixiyo doodaha bulshada ka dhex aloosan.
Anshaxa iyo asluubku waxa uu ahaa in aan hadalka la iska dhabqin, jaarriga iyo jaafaajiriqana laga yareeyo geedka garta. Haddii qof hadal wadana aan laga hororsan ama laga rabshin, oo waxa lagu maahmaahi jiray “ hilbo ayaa la wadaagaa hadalse lama wadaago”. Kolka ay labada qof ee garramayaa hadlayaan waxa hadalka ka guri jiray nin loo yiqiinnay “wargure”. Warguruhu waxa uu adeegsanayaa erayo koobkooban oo muujinaya dhugasho iyo dhegraaricin. Marka ay joogto garta iyo geedka, ragga waxa loo qaybin jiray afar;
Nin kasa oo kara
Nin kasa oon Karin
Nimaan kasin oo kara
Nimaan kasin oon Karin.
Haddaba, maadaama oo la dhaho xeerbeegtiu waa carrab eegato, oo looga jeedo erayga qofka afkiisa ka soo baxa ayuun bay wax ugu xukuntaa, waxa u furrayd in uu qareen samayasto, haddii labada qof ee garramaya midkood yahay agnaan aan lahayn aftahamo uu ku caddeeyo gartiisa., waxaana lagu odhan jiray “ ma nin baad igamanaysaa mise adiga ayaa hadloonaya”?.
Xeerbeegtida garta naqdaa labo midkood uun bay noqon jireen—samo-talis ama hadimo-talis. Si aanay haddaba hadimo-talis u noqon, waxa jirta maahmaah ay ku ducaysan jireen oo ah “Eebbaw aqoondarro ha nagu cadaabin, eexna hanagaga tegin”. Si aanay gartu u qalloocan waxa xeerbeegtida lagu xulan jiray xaajoaqoonnimo iyo maskax furnaan. Middaas ayaanay ku baxday murtida caanka ah ee odhanaysa “ waayeel lama xulee wagarad hala xulo”. Sida uu qoraaga Axmed Sh.Cali Axmed(Buraale) ku sheegay buggiisa “Xeerkii Soomaalidii hore”, nin la odhan jiray Xasan Cawl oo ahaa Soomaali noolaa labo qarni ka hor, ayaa isaga oo 10 jir ah yimi geed gar lagu hayo. Geedkii ayaa uu dhalada uga baxay, markii labadii dhinac ee garramayay hadleen, ee la damcay in xaajada waayeel loo saaro, ayaa uu dusha geedka ka soo yidhi murtidan caan baxday ee ah “waayeel ha xulina ee waxgarad xula”. Halkii ayaana isagiina lagu daray guddidii garta ka garsooraysay, dooddiina ku idlaatay.
Abwaankii weynaa ee Cali Jaamac Haabiil, oo nin xidaar ah oo ay saaxiibbo ahaayeen geeridiisa loo sheegay, ayaa meerisyada gabayga ah ee soo socda ku tilmaamay sida uu saaxiibkii u ahaa nin waxgarad ah oo garaha murga maarayn yaqaannay. Waxa uu yidhi;
Gar adkaatay xaajada gurracan guurti kala maagtay
Haddii geedka la isugu tago golaha waayeelka
Nin waliba haddii uu gees damcoo giijo madaxiisa
Gaaggaabayaa iyo isagu gees u hadalyaaba
Guddoonkii lawada raaci jiray gocanayaa mooyi.
Golaha xeerbeegtidu kuma uu go’aan qaadan jirin war hal dhinac ah oo loo sheego. Oo bilmetelan, haddii nin raacshe(mudduci)ahi dacwad golaha keeno, go’aan lama gaadhi jirin illaa reebihii(muddaacalaygii) isna warkiisa la helo oo la dhegaysto. Sidaas waxa ay u yeeli jireen si ay uga fogaadaan gaboodfal ka dhashay degdeg, oo waxa ay ku maahmaahi jireen “ laab la kac lurbaa ka dhasha”.
Hab-bilawga garta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
“Hoosba hadalkiis lehe”, odhaah-goleedka gartu waxa uu ahaa mid habaysan oo kala hormaysan. Tusaale ahaan, garta labo ruux u dhaxaysaa waxa ay mari jirtay afar marxaladood oo kala ah;
Ducadu: waa Alle-bari iyo tuugmo muujinaysa Eebbe u hoggaansanaan iyo summad islaamnimo. Garta inta aan muddicigu bilaabin, inta badan duco afsoomaali ah ayaa laga hormarin jiray oo lagu ibofuri jiray.
Didiiftu: waa afeef hordhac ah oo laga ararto arrimo soo fool leh, si aan hadhaw la isula afgaran waayin. Didiifta waxa tusaale fiican u ah, sheekada uu Cabdisalaan Caaradhuub ku qoray buuggiisa “Garta dhaqanka iyo xeerarka Soomaalida”, ee khusaysa nin la odhan jiray Axmed Koorjaan, oo nin kale ay geenyo isku qabsadeen.
Ninkii iyo Axmed Koorjaan markii ay garramayeen ayaa uu Axmed ku afeeftay “aniga gartayda saddex nin makhraati uma galaan: nacfi-jiid, naas-jiid iyo lug-jiid”. Nacfi-jiid waa ninka wax la siiyo. Naas-jiid, waa ninka abtiga loo yahay ee inantu dhashay. Lugjiidna waa ninka seeddiga ama sodogga loo yahay ee reerka inan ka qaba.
Dacwigu: waa ubucda doodda, waana halka lagu mullaax-diiro hadallada dacwiga ah, laguna axalo-cunsiiyo caddaymaha loo cuskanayo oo idil.
Malluugtu: mar walba ma timaaddo. Waayo waa bidaal(tuhmo), oo waxa ay timaaddaa uun haddii uu jiro shaki uu muddicigu ka qabo muddaacalayga, in uu la maaggan yahay dagaal ama waxyeello kale oo gaadmo ah. Sidaasna uu uga rabo tuhmo-ssaar.
Noocyada eedaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
marka laga hadlayo waxyaabaha gari ka imaan jirtay ama la isku qabsan jiray waxaa loo qaybiyaa
dhiig iyo dhaqan.
Dhiigga ayaa usii kala bixi jiray diyo(qudh) iyo dakhr(qoon). mid walibana waxa uu sii noqon jiray kas ama kama’. Midkuu noqdo ayaa waxa uu sii noqon jiray mooro(gefka aad leedahay ama qof qoyskaaga ahi leeyahay) ama magan(gefka loo geysto qof aad adigu magan galisay).
Dhaqanku: waxa uu ahaa xilo ama xoolo. Xooluhu waxa ay noqon jireen bar(xoolo nool) ama beer. Midka uu labadaas yahay ayaa awaxa uu ahaan jiray magan ama mooro.
Gartu dhiig iyo dhaqan midkii ay dooni ha noqotee, kolka la furdaaminayo ee la furfurayo, waxa ay noqon jirtay laba mid uun
Ugub: oo ah in ay tahay mid cusub oo aan xeer hore ka oollin.
Ab-lagasoo-gaar: ama karinley, oo ah mid hore xeer looga yeeshay oo aan ku cusbayn xeerbeegtida.
Noocyada garaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Laba nooc midkood ayaa garuhu intabadan noqon jireen, oo kala ah;
Gar muslaxo: oo sidoo kale loo yiqiinnay gar sokeeye. Waa garta dhex marta laba qof/qolo oo aan kala fogayn, cadaawad horena aysan ka dhaxayn. Garta noocan ahi muslaxaad iyo gacanqaad ayaa ay ku gebogaboobi jirtay, iyada oo la raacayo maahmaahda soomaaliyeed ee ah “ hadal xigaal iyo hilib idaadba qabawgaa lagaga dhergaa”. Sida bandanna gartani ma aha mid labada dhinac midna wax ku waayo, oo waxa jirta murti tidhaahda “gar muslaxo cidna ma qadiso”.
Garcdaawo(garnacley) sidoo kalena waxaa loo yaqaannaa “jilibcarro”. Waa garta u dhaxaysa laba qof/qolo oo aan heshiis hore ka dhaxaynin, hoos-katuurro iyo harraatiyo horena isku ogaa. Jilibcarradu waa garaha ugu qallafsan ee aan lagu kala kicin ilaa meel la saaro, waxa aanay ku binaysan tahay maahmaahda Soomaaliyeed ee tidhaahda “xoolahaagu xero ha kuugu jireen ama xeer ha kuugu maqnaadeen”, iyo midda kale ee tidhaahda “garna garteedaa lagu doonaa, ,madheerna garkeedaa lagu doonaa”. Jilibcarradu ma aha gar cid waliba niqi karto, ee ragga foolaadka ah uun baa ka dabbaasha. Qaryaan Cabdillaahi Macallin Dhoodaan, oo ku baanay in uu yahay buuni weyn oo wax uga baxsan yihiin sida loo bisleeyo garnacleyda ayaa ku gabyay;
Kanbalkay lahayd jilibcarro iyo meel kabdhoodka ahe
Garta keedii kaabiga la galay ee lagu kawaanleeyay
Kiskisaha middaa lagu xakabay kadinna loo diiday
Kolkaan maalmo koolkoolliyay dib u kadlaysaaye
Kaddibkaan ka kaaftoon lahayn yaa kasbaday mooyi.
Abwaan Maxamed-Haykal Muxumed ayaa isaguna labo meeris ku sifeeyay cidda mudan in ay ka arrimiso garta jilibcarro. Waxa uu yidhi
Guurti talada loo xulay xaqay garabka siisaaye
Garta jilibcarro iyo doodda way garasho eegtaa.
Garta waxa caddaymo u noqon jiray laba wax mid uun; makhraati ama millad. Makhraatiga aalaaba waxa lahaa muddiciga. Milladdana sida badan waxa lahaa mudaacalayga. Milladdu maadaama oo ay dhaar tahay laguma degdegi jirin, si fududna looguma dhici jirin, oo soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa “ tolkaa dhiig waa loo soo duwaa, dhaar se looma soo duwo”.
Garta marka la dhegaysto, guddi tiro kooban ah ayaa loo xuli jiray iyagaana soo go’aamin jiray, mana ay raagi jirin oo waxa ay ku dhaqmi jireen maahmaahda tidhaahda” guddi raagtay ama hal meesha ku jiray ayay ka saaraysaa, ama hal aan ku jirin ayay ku soo daraysaa”. Go’aanka guddidu labo midkood ayuun buu noqdaa markaas, oo ah; gar caddaaladeed ama gar eexo. Haddii kolkaas garramayaasha midkood uu saluugo go’aanka guddida, waxa u furnayd in uu racfaan ka qaato, isaga oo geed kale tagaya oo mar kale gartiisa sheeganaya. Waxa se samaha iyo milguhu ahaa in la guddoonto go’aanka guddida iyada oo la raacayo murtida odhnaysa “ gar dabadeed gunuunuc ayaan nacay”.
Labada qof ee garrama laftooda waa in aanu midkoodna ahayn gardiid, ee uu mid waliba yahay nin fahamsan falsafadda qotada dheer ee odhanaysa “ gari laba nin kama wada qosliso” iyo maahmaahda Soomaaliyeed ee ah “ nimaan garoow barani gar ma baran”. Abwaan Faarax Nuur ayaa ku geeraaray;
Rag hadduu garramaayo
mid uun bay ku go’daaye
gef wixii noqon dooniyo
aan gedaafaha reebo.
Abwaankii isna la odhan jiray Xasan Dhuux Weyd, ayaa nin ay mar garrameen oo garwshiinyo uu ka waayay ugu maansooday
Raggu waa gar qaataa
Ama se waa garaabaa
Adigu se geed xillaad tahay
Oon dhanna guurti ka ahayn.
Waxa aan la hilmaami Karin in milgaha iyo maamuuska sare ee hannaanka gartadhaqan ee Soomaalidu lahaa, ay qeybta ugu mudan uguna ballaadhan salka ku haysay shareecada Islaamka, oo asal u ahayd badiba xeerarka garaha ee ku saabsan, qoomaha, diyada, guurka, furriinka iyo dhaxalka.
Gebogebadii, maanta waxbadan oo dhaqankeennii suubbanaa ka mid ah ayaa tasoobay, iyada oo ay isugu darmeen daryeel la’aan xagga dhaqanka ah iyo daryeel la’aan qoraaleed. Meelaha ugu mudan ee u baahan in daraasad dheer iyo kayd qoraal laga sameeyana waxa ugu horreeya mawduuca garta iyo garsoorka.
1. Sooyaalka Soomaaliya; Cabdiqaadir Aroma revised edtion 2005
2. Xeerkii soomaalidii hore: Axmed Sh.Cali Axmed(Buraaale), wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, Akaademiyaha dhaqanka, Muqdisho 1977.
3. Xeer-dhaqameed, Xeer-Ciise, Jaamac Muuse Miicaad, Jabbuuti 2010.
4. Garta dhaqanka iyo Xeerarka Soomaalida, Cabdisalaan Caara-dhuub. Burco.
5. Qaamuuska Af-Soomaaliga, Cabdalla Cumar Mansuur iyo Annarita Puglielli, Roma TrEpress 2012.
"Nuqul Archive". Waxaa laga kaydiyay the original 2020-12-14. Soo qaatay 2020-05-28. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xeer&oldid=217708"
Maxkamado hadba nuuca
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Sebteembar 2021, marka ee eheed 06:43.